Global Voices teny Malagasy » Vehivavy Iraniana – Miteny ‘Tsia’ Amin’ny Fanerena Hirako-boaly Hijabs Hatramin’ny 1979 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2012 8:45 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Taorian'ny nahatongavany teo amin'ny fahefana tao Iran tamin'ny 1979 dia nanomboka nitaky ny tsy maintsy hitondran'ny vehivavy Iraniana voaly (hijab) eny imasom-bahoaka ny fitondrana Islamika. Telopolo taona aty aoriana, mbola mitohy manao famoretana ny amin'ny tsy maintsy hirakofam-boaly hatrany ny polisy Iraniana isaky ny lohataona mba hifehezana ny fomba fitafin'ny olona.
Ny 10 Jolay 2012 dia nisy pejy fanentanana iray tao amin'ny Facebook natsangan'ny “Iraniana Liberaly, Mpianatra sy Manana diplaoma” hitenenana hoe ‘Tsia’ amin'ny fanerena hitondra hijab.
Hatreto ny pejy “Unveil women's right to unveil” – Esory voaly ny zon'ny vehivavy tsy hirako-boaly  dia nahazo “fankafizana” maherin'ny 26.000. Anjatony ireo lehilahy sy vehivavy nizara ny sary manokan'izy ireo, ny zava-niainany ary ny fanehoan-keviny, nampiany ny fangon'ilay pejy. Ny sasany tia mirakotra voaly ary ny hafa tsy mankasitraka. Saingy ny rehetra no miara-manaiky fa tokony ho zon”izy ireo ny hifidy hitafy na tsia.
Azontsika vakiana  ao amin'ilay pejy Facebook hoe :
Ny faneren'ny fanjakana ny tsy maintsy hitondràna voaly dia nanakana ireo vehivavy tsy hahazo ny zo fototra ho azy ireo. Amin'ny fametrahana polisy manokana isaky ny kihon-dàlana, arabe sy lalan-kely, tsy nitsitsy fandaniana ny fanjakana mba hanandramana hanaovana izay hampifanaraka ny vehivavy amin'ireo fepetra sy ireo fitsipiky ny saina terin'ny fitondràna ary mahatonga vehivavy hahatsiaro tna ho anaovana antsojay sy kinendry hatrany. Na dia nanohitra hatrany aza ny vehivavy Iraniana ary nitsipaka io fepetra sy fomba fitondra manohitra ny maha-olona io, tsy nandray ny lesona tokony ho azy mihitsy ireo mpampihatra azy, ary isan-taona rehefa lohataona dia hitantsika foana ny onjam-pamoretana henjana atao ny vehivavy.
Ny “Iraniana Liberaly, Mpianatra sy Manana diplaoma” dia manambara ny fanentanany “Tsia amin'ny fanerena hitondra hijab” ho fanehoana firaisankina amin'ny vehivavy Iraniana ary hanipihana tsara ny fahalalahana ara-pitafiana. Raisina amin'ny fo madio izay rehetra fikambanana na olona maniry hiara-hiasa sy hanampy amin'ity fanentanana ity.
Nane Sarma mizara  [fa] ny zavatra niainany vao haingana tao Laleh Park any Tehran, renivohitr'i Iran :
Niaraka tamin'ny namako aho tany ary nitokelaka izahay, ary avy eo nitsoka ny rivotra ka latsaka ny saron-dohako. Tamy nanantona ahy ireo manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna. Tsy te-hilaza momba ny fitondran-tenan-dry zareo aho, ny fandrahonan-dry zareo sy ny sisa… saingy ity no zavatra voamariko rehefa nentina an-tànana nivoaka ny kianja aho. Nahita tovolahy vitsivitsy eo amin'ny 13-14 taona eo aho nifoka sigara sy nanorisory ny olona, saingy tsy nisy nahazo fampitandremana na famaizan'ny mpitandro filaminana izy ireo. Dia ireo izay nandroaka anay nivoaka ny kianja teo aloha ihany noho ny nilalaovana baolina kitra lahy sy vavy nifangaro. Sahala amin'ny eritreretin-dry zareo hoe tokony hitady trano foana izahay, ary mandeha any mifoka sigara sy mandany ny herinay amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Kamal, tovolahy Iraniana iray manoratra  [fa] :
Silamo aho, ary lazaiko fa araka ny fampianarana ara-pinoana dia tsy misy olona afaka manery ny fitondràna voaly ho an'ny vehivavy.
Nafiseh manoratra  [fa] fa izy dia nampakatra ny sariny manokana misarom-boaly sady miteny hoe, “Na dia misarom-boaly aza aho dia tsy manan-jo kosa hanery ny hitondran'ny hafa azy io.”
Afsaneh miteny hoe :
Iriko indrindra i Iran mba ho firenena iray tsy ho an-tery ny firakofam-boaly ao aminy. Ireo izay mankasitraka na mandà ny hijab dia tokony halalaka hifidy izay fomba fitafiny. Ny tsirairay dia tokony hanaja sy hanaiky ny fomba fiainan'ny hafa. Tsy olan'ny vehivavy, raha (angamba ny sasany ihany) dangitra ny lehilahy mijery vehivavy tsy misarom-boaly. Tsy tokony ho menatra na ho tezitra amin'ny karazana fanohanan-kevitra toy izany ny lehilahy.
Amir Lohrasbi mampahatsiahy  fotoana iray tao anatin'ny tantara tany ampiandohan'ny Revolisiona Islamika, rehefa injay ny gazety Iraniana, Ettelat, nitanisa an'i Ayatollah Mahmoud Taleghani , endrika diso fantatra amin'ny fitarihana ny revolisiona, olona nandà ny fanerena ny tsy maintsy hirakofam-boaly hijab, ary mpampanoa lalàna revolisionera izay niteny ireo olona manome fahasorenana ny vehivavy tsy mirako-boaly ho mpanohitra ny revolisiona.
33 taona lasa izay no nanomboka ny tolona manohitra ny fanerena hirako-boaly rehefa nanao fihetsiketsehana tao Tehran ireo vehivavy be herim-po tamin'ny Martsa 1979 ary notsatohan'ireo mpitandro filaminana mpomba ny fitondrana tamin'ny antsy. Nandresy ny herisetra, napetraka an-terisetra ny tsy maintsy hirakofana voaly, saingy ny hetahetan'ireo vehivavy ho afaka misafidy malalaka kosa dia mbola mitoetra sy matanjaka lavitra noho ny famoretana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/07/38017/
 “Unveil women's right to unveil” – Esory voaly ny zon'ny vehivavy tsy hirako-boaly: https://www.facebook.com/na.be.hejab.ejbari
 miteny hoe : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=304447556320201&set=a.300841390014151.66163.292424940855796&type=1